Mihen-danja Ve Ny Fitsarana Ao Zeorzia Sovietika Taloha? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2017 6:37 GMT
Ireo Polisy Zeorziana amperin'asa. Sarin'ny mpampiasa Flickr jp avy amin'ny Wikimedia Commons. (CC BY 2.0)
nosoratan'i JUSTINE DOODY
Nosoratana ho an'ny Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI) ity lahatsoratra manaraka ity ary navoaka ato amin'ny Global Voices miaraka amin'ny fahazoana alàlana. Izay fomba fijery voalaza ato amin'ity lahasoratra ity dia tsy voatery hifanaraka amin'izay an'ny Global Voices.
Tamin'ny 10 Jona 2017, Zeorziana an'arivony no nanao hetsi-panoherana teny amin'ny làlan'i Tbilisi, renivohitry ny firenena, ho fanohanana ireo mpikambana roa ao anatin'ny vondrona Rap Birja Mafia. Nosamborina ireo zatovolahy noho ny zava-mahadomelina izay voalaza fa naha-voafitaka azy ireo. Niakatra dingana iray hafa ilay hetsi-panoherana tamin'ny fahatapahan'ny fitokisan'ny Zeorziana ny rafitra fampiharana ny lalàna .
Ny fahombiazan'ny fanavaozana tao amin'ny polisy, nataon'ny filoha teo aloha Mikheil Saakashvili tamin'ny taompolo voalohany tamin'ny taonjato faha-21, dia modely ho an'ny fanovàna ho an'ireo firenena nandalo tetezamita, saingy tsy mety tsy maharitra ilay tombony. Tamin'ny Aprily 2017, 38% n'ny Zeorziana ihany no nandahatra ny fahombiazan'ny polisy ho tsara na tena tsara, nidina avy amin'ny 60% vao haingana tamin'ny Novambra 2013. Tamin'izany fotoana izany, 13% monja no nanamarika ny fahombiazan'ny fitsarana sy ny biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana ho tsara na tena tsara ; 27% no nilaza fa misy toe-javatra ratsy na tena ratsy ao amin'ny fitsarana, ary 19% no nilaza mitovy amin'izany momba ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana. Miha-mitontongana ve ny fahefàn'ny lalàna ao Zeorzia?
Nahazo ny isa 6.5 i Zeorzia tamin'ny fepetran'ny “Fahefan'ny Lalàna” tao anatin'ny Tondrom-Panovàna avy amin'ny Bertelsmann (BTI) 2016, zavabita mendri-kaja izay nametraka azy ao amin'ny sokajy “Mahitsy”, miaraka aminà firenena 22 hafa an-dalam-pandrosoana. Voalahatra ho ambany noho ireo firenena sivy voasokajy ho “Tena lafatra” i Zeorzia, saingy ambony kokoa noho ireo firenena 97 sisa tavela voatondro ho “Mpandàla ny Rariny”, “Tsy Lavorary”, na “Mahantra”. Na izany aza, marihan'ilay tatitra ireo olana ao amin'ny firenena, na izany amin'ny fanenjehana ny fanararaotam-pahefana ataon'ny birao, na ny fahaleovantenan'ny fitsarana, olana roa izay mandray anjara amin'ny fikorosian'ny fitokisan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao.
Tsy ny raharaha Birja Mafia ihany no hany tranga avo lenta mameno ireo lohateny lehibe. Tamin'ny May, nalaina an-keriny tao Tbilisi i Afgan Mukhtarli, Azerbaijani mpanao gazety, ary nafindra tany am-ponja tany Azerbaijàna, ary tamin'ny volana Jolay, nitarika ny fampiatoana ny lehiben'ny polisin'ny sisintany sy ny lehiben'ny Sampam-pitsikilovana ilay fiampangàna firaisana tsikombakomban'ny polisy Zeorziana. Nilaza ireo mpisolovava sy ny vadin'i Mukhtarli fa nanao ny fanamian'ny mpitandro filaminana Zeorziana ireo mpaka an-keriny an'ilay mpanao gazety. Tamin'ny Jona, naato ny iray amin'ireo mpitarika ny polisy ao Tbilisi taorian'ny namoahan'ny haino aman-jery Zeorziana lahatsary iray mampiseho ny fanararaotam-pahefana niharihary nataonà polisy, tamin'ny tranga iray tamin'ny Martsa izay nahitàna lehilahy iray antsoina hoe Shota Pakeliani tsy nahatsiaro tena taorian'ny ratra nahazo azy nandritra ny fitazonan'ny polisy azy. Amin'ireo toe-javatra roa ireo, dia nandray andraikitra ny governemanta taorian'ilay fitarainam-bahoaka, saingy nilaza kosa ireo mpitsikera fa zara raha mitranga izany, ary na dia misy aza dia tsy dia henjana loatra ny vokany.
Tamin'ny 2015, nambaran'ny biraon'ny mpampanoa lalàna drafitra ny fananganana Sampan-draharaha Fanadihadiana Heloka Bevava Natao nandritra ny Fizotry ny fitsarana. Nefa noho ny fiampangàna matetika ny Biraon'ny mpampanoa lalàna ho manana faniriana ara-politika, dia mety tsy hanome ny tena vahaolana amin'ilay olana io sampana io. Tamin'ny 2016, raharaha 173 mahakasika izay voalaza fa fampijaliana nataon'ny polisy no nanokafana ny fanadihadiana; saingy tsy misy amin'izy ireny mahakasika ny herisetran'ny polisy na ny fampijaliana, fa fotsiny noho ny heloka bevava tsy dia lehibe loatra momba “ny fihoaram-pahefana”. Fikarohana dimy monja no nitarika ho any amin'ny fanenjehana heloka bevava, ary ny roa ihany no niafàra taminà didim-pitsarana fanamelohana. Ao amin'ny tatitra isan-taona 2016/2017, nasehon'ny Amnesty International ny ahiahiny momba ny tsy fihetsehan'ny governemanta Zeorziana mifehy ny lalàna mba hamoronana rafitra mahaleotena ho fanadihadiana ny fanitsakitsahana zon'olombelona ataon'ny rantsam-panjakana mpampihatra lalàna.
Ny Martsa 2017, nahazo fahazoandàlana hivezivezy malalaka ao anatin'ny Vondrona Eoropeana i Zeorzia, ary nanomboka nanan-kery tamin'ny Jolay 2016 ny Fifanaraham-pikambanany niaraka tamin'ny Vondrona Eoropeana. Nanohana tanteraka ny haha-mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana ny Zeorziana. Tamin'ny fanadihadiana notontosaina tamin'ny Febroary sy Martsa tamin'ity taona ity, 90% tamin'ireo namaly no nankasitraka ny haha-mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Na izany aza, na tsy mbola ao anatin'ny masom-pitilian'ny Vondrona Eoropeana aza ny fahafahana miditra, dia tokony hazoto hanaraka ny fandaharam-potoanan'ny Fikambanana ny governemanta Zeorziana, izay ahitana ny fanavaozana ny asan'ny mpampanoa lalàna. Mandroso ny ezaka atao hanaovana izany. Tamin'ny taona 2012, nosarahana tamin'ny Ministeran'ny Fitsarana ny biraon'ny mpampanoa lalàna, ary teo am-piandohan'ny 2016 dia nisy Filankevitry ny Fampanoavana sy Birao Mpanolotsaina napetraka mba hampitombo ny fahaleovantenan'ilay birao. Tamin'ny tatitra tamin'ny Janoary 2017, nidera ny fandrosoan'i Zeorzia tamin'ny fampihenana ny kolikoly ny rantsana mpanohitra ny kolikoly ao amin'ny Filankevitra, ny Vondron'ny Firenena Manohitra ny Kolikoly (GRECO), ary niarahaba ny ezaky ny firenena hanavao ny asan'ny fampanoavana. Fa nanamarika kosa ny GRECO fa ilaina ny asa fanampiny mba hampiharana tanteraka ireo fanavaozana ary hampihenana ny dindon'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna momba ny fanendrena ny mpampanoa lalàna ambony sy ny asan'ny Filankevitry ny Fampanoavana.
Tsy fampidirana Politika ao amin'ny Fitsarana
Ny karazana fifandraisana politika toy izany dia manampy amin'ny olana ao anatin'ny polisy. Miankina amin'ny sitrapon'ny minisitry ny atitany ny fanendrena olona ambony ao amin'ny polisy, izay manohintohina ny fahaleovantenan'ilay hery. Ao amin'ny fitsarana ihany koa dia mbola mitohy ny lovan'ny fampidirana politika navelan'ny fitondrana Saakashvili, na dia nanao dingana maromaro hanatsarana ny toe-draharaha aza ny governemanta vaovao. Ny biraon'ny Mpiaro ny Vahoaka dia toerana iray mazava. Tompon'andraikitra amin'ny fanarahamaso ny zon'olombelona sy ny fahalalahana any Zeorzia, misitraka ny fanohannaa midadasika avy amin'ny vahoaka izy io, na tsy ampiharina matetika aza izay toromarika omeny.
Tokony ho laharam-pahamehana amin'ny antoko Georgian Dream ny fanafoanana ny politika ao anatin'ny fitsarana, ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, ireo fanantenan'ny Vondrona Eoropeana amin'ilay firenena, ary angamba ny tombontsoa poilitika manokan'ny antoko aza. Ny antokon'ny fitondrana teo aloha, ny Hetsiky ny Firaisana Nasionaly an'i Saakashvili, dia nahatsapa, tamim-pahadisoam-panantenana, fa mety hisy fiantraikany ara-politika ny tsy fanomezana tohana sahaza hisian'ny fahefan'ny lalàna. Nahatonga ny fahaverezan'ny fitokisan'ny vahoaka ny antoko sy fanonganana azy nony farany tamin'ny 2012 ireo tranganà fanararaotana any am-ponja sy ny herisetran'ny polisy izay niparitaka be. Raha tsy afaka manatsara ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny rafitra ny governemanta ankehitriny, dia mety hahita fa afaka miverina ny tantara.
Mpamoaka lahatsoratra sady mpanao fanadihadiana i Justine Doody. Manoratra ho an'ny bilaogin'ny Bertelsmann Stiftung BTI sy ny Gazety SGI izy.